” ဘာမှ သိပ်မျှော်လင့် မနေနဲ့ ” ပေါက်တပ်ကရ ပါးစပ်ထဲရှိတာ ထင်ရာ မြင်ရာ သမိုင်းလုပ် ဟောနေ ပြောနေတဲ့ သီတဂူဘုန်းကြီး လို ဘုန်းကြီး | Dr. Abdul Rahman Zafrudin @ Ko Ko Gyi
Home” ဘာမှ သိပ်မျှော်လင့် မနေနဲ့ ” ပေါက်တပ်ကရ ပါးစပ်ထဲရှိတာ ထင်ရာ မြင်ရာ သမိုင်းလုပ် ဟောနေ ပြောနေတဲ့ သီတဂူဘုန်းကြီး လို ဘုန်းကြီး
” ဘာမှ သိပ်မျှော်လင့် မနေနဲ့ ” ပေါက်တပ်ကရ ပါးစပ်ထဲရှိတာ ထင်ရာ မြင်ရာ သမိုင်းလုပ် ဟောနေ ပြောနေတဲ့ သီတဂူဘုန်းကြီး လို ဘုန်းကြီး
” ဘာမှ သိပ်မျှော်လင့် မနေနဲ့ “
အကိုက အကောင်း ကို မမြင်နိုင်ဘူး တဲ့။ xxx ကောင်းတာမြင်မယ်ကြံတိုင်း၊ မဟုတ်ကဟုတ်က ဇောက်ထိုးမိုးမျှော်တွေ တက်တက်လာတော့ ငါ့မလဲ စိတ်ဓါတ်ကျရပါရော။
ပေါက်တပ်ကရ ပါးစပ်ထဲရှိတာ ထင်ရာ မြင်ရာ သမိုင်းလုပ် ဟောနေ ပြောနေတဲ့ သီတဂူဘုန်းကြီး လို ဘုန်းကြီးမျိုး ကို
သေနတ်ကိုင်ထားတဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေက ကိုးကွယ်၊ ကမ္ဘာ့ဉာဏ်အကောင်းဆုံးထဲပါတယ် ဆိုတဲ့ နိုဘယ်လ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုရှင် က ဖါးလျား သွားဖြဲပြီး ‘တပည့်တော်မဆရာတော် တပည့်တော်မ ဆရာတော် ‘ လို့ ပြောနေတဲ့ တိုင်းပြည်မှာ လွယ်မယ် မထင်။
← ပြုစားခြင်းအတတ်အပါအ၀င် ပထမဆုံးမှော်ပညာသင်တန်းကျောင်း ရန်ကုန်တွင်ဖွင့်လှစ် Wizardry School of Myanmar
“ကိုယ်က စပြင်ရမဲ့ အရာ” ပြောချင်တဲ့ ကိစ္စက ဆွလားသ် ၀တ်ပြုဖို့ ကိုယ်လက်သန့်စင်ခြင်း ကိစ္စ… →
2 thoughts on “” ဘာမှ သိပ်မျှော်လင့် မနေနဲ့ ” ပေါက်တပ်ကရ ပါးစပ်ထဲရှိတာ ထင်ရာ မြင်ရာ သမိုင်းလုပ် ဟောနေ ပြောနေတဲ့ သီတဂူဘုန်းကြီး လို ဘုန်းကြီး”
Myanmar President under the advise of Min Aung Hlaing and DASSK awarded that historically idiot Thidagu the highest Buddhist award. Bama Buddhists could not monopolise or represent all the Buddhists in Myanmar. If take the vote of the original Mon Buddhists and Mon Monks there would be nearly 100% disagreement or protest votes as Thidagu had recently insulted them with false or fake history as if Shwedago pagoda was not built by Mons but Bamas. And the Buddhist Ethnic Minorities would hate the Thadagu for supporting the Bama Military’s war as legitimate and just war against the minorities.
It isaSHAME that Myanmar President, Min Aung Hlaing and DASSK…wrong thought that the person who insulted one of the ASEAN PM with vulgar words is FIT to be given the highest Buddhist award. No wonder Myanmar FB is full of insults, lies and vulgar words. By the way, Min Aung Hlaing went to donate the another FOUL-MOUTHED rape specialist Wirathu who insulted the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Ms Yanghee Lee asawhore.